Izibalo zango-2011 kuThengiso lokuThengisa kunye neMedia Media
NgoLwesine, Aprili 14, 2011 NgeCawa, uJuni 21, 2015 Douglas Karr
Ngale ntsasa, ndiyafunda I-eConsultancy's State of Search Marketing Report ka-2011. Ingxelo yeNgxelo yokuThengisa ngokuKhangela ka-2011, eveliswe yi-Econsultancy ngokudibeneyo SEMPO, ijonge nzulu kwindlela iinkampani ezisebenzisa ngayo ukukhangela okuhlawulelweyo, ukukhangela kweinjini yokukhangela (ukukhangela kwendalo) kunye nentengiso yemidiya yoluntu.
Ingxelo, equlathe uqingqo-maxabiso lwentengiso, ilandela kuvavanyo lwabaphenduli abangaphezu kwe-900 kuzo zombini iinkampani (abathengisi abasecaleni) kunye neearhente, kwaye isekwe kwidatha evela kumazwe ahlukeneyo angama-66 aqokelelwe ngoFebruwari nango-Matshi 2011.
Iziphumo zigubungela inkcitho, imiceli mngeni yangoku, ukusetyenziswa kweinjini zokukhangela ezithile kunye neendlela ezivelayo kuphando oluhlawulelweyo, i-SEO kunye nemithombo yeendaba zentlalo. Isifundo, ingxelo yesithandathu yonyaka ye-SEMPO yeNgxelo yoPhando, ikwaqulathe imeko yonyaka kunye nokuqhekeka kwenkampani kunye neziphumo zearhente kwicandelo ngalinye.
Ekufundeni uxwebhu, olona tshintsho lukhulu endilufumeneyo kukutshintsha kotshintsho kuhlahlo-lwabiwo mali kusaprintwa kuye kwintengiso yokukhangela kunye / okanye kwiinkqubo zosasazo lwentlalo. Ngaphezulu kwesiqingatha sabaphenduli beenkampani (iipesenti ezingama-53) batshintsha uhlahlo-lwabiwo mali kushicilelo! I-imeyile ngqo kunye nomabonakude wentengiso yokuprinta kodwa ziyachaphazeleka ngokunjalo.
Ngaphandle kokukhangela kunye nentlalontle, enye indlela yokufumana ingqalelo enkulu kuvavanyo iselfowuni. Qiniseka ukuba uzisa izandla kule ngxelo- yenye yeengxelo ezineenkcukacha ndizibonile okwethutyana kwimo yentengiso yokukhangela-ngakumbi ngokubhekisele kutshintsho kwezinye iindlela kunye namajelo.
tags: 2011UqoqoshoushicileloUphando lwezoPhandoUtshintsho kuhlahlo-lwabiwo maliSocial Media Marketing
IGrabaChat ithatha amaKhaya aPhezulu oPhezulu ngeVeki yeVeki yokuQala